राप्तीमा एकै साथ फुटवल, क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता सुरु » Farakkon
राप्तीमा एकै साथ फुटवल, क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगीता सुरु
बुधबार, कार्तिक ६, २०७६ १६:३३
देउखुरी दाङ, कार्तिक ६ ।राप्ती गाउँपालिका वडा नं. १ मा फूटवल, क्रिकेट र ब्याडमिन्टन प्रतियोगिता बुधवारदेखि सुरु भएको छ । खेलको पाखापानी क्रिकेट मैदानमा उद्घाटन गरिएको हो । राप्ती गाउँपालिकाका युवाहरुलाई लक्षित गरि आयोजना गरिएको प्रतियोगीताको गाउँपालिकाका अध्यक्ष नुमानन्द सुवेदिले उद्घाटन गरेका हुन ।
तीन दिनसम्म चल्ने प्रतियोगितामा नेपाल राट्रिय माध्यामिक विद्यालयको खेल मैदानमा फुटवल, पाखापानी खेल मैदानमा क्रिकेट र पुल्चोकको शिव मन्दिर परिशरको कोर्टमा ब्याडमिन्टन खेल हुने भएको छ । वडा नं. १ मा आयोजित फूटवल प्रतियोगितामा ७ टिम रहेका छन् भने क्रिकेट प्रतियोगीतामा पनि ७ टिम नै रहेका छन् । त्यस्तै ब्याटमिन्टन प्रतियोगितामा भने ९ टिमले प्रतिपर्धा गर्ने भएका छन् ।
वडा अध्यक्ष ताराबहादुर डिसीको अध्यक्षतामा खेलको उद्घाटन भएको हो । आगामी दिनमा भलिवल र कराँते खेलको प्रतियोगिता पनि आयोजना गरिने जानकारी दिइएको छ । विजयी टिमलाई नगद, प्रमाणपत्र र शिल्डले पुरस्कृत गर्ने आयोजकले जानकारी दिएको छ ।